PHOTOSHOP မှာရောင်စုံတဲ့အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓာတ်ပုံကိုအောင်လုပ်နည်း - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ် Coloring
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် iTunes ကို software ကိုအပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်, သင်အလုပ်ပြီးအောင်တားဆီးကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီနေ့အမည်ရကဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်သောအခြေခံနည်းလမ်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အမှားကုဒ်9ရက်နေ့ကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Apple ကကိရိယာကို update သို့မဟုတ် restore ပြန်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်, ပန်းသီး gadget က၏အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကုဒ်9နှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်။ စနစ်တစ်ခုပျက်ကွက်၏ရလဒ်အတွက်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် device ကို firmware ကိုအတူသဟဇာတမ၏: အဆိုပါအမှားအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
Method ကို 1: device ကို Restart
ကွန်ပျူတာများနှင့် Apple-device ကို - ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါအမှား9ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, သင် devices တွေကို reboot သငျ့သညျ။
ပန်းသီး gadget ကတစ်အတင်းအကျပ်ပြန်ဖွင့်လုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုသည်: ကတစ်ပြိုင်နက်တည်းပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်နေအိမ်ကျင်းပရန်နှင့် 10 စက္ကန့်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။
Method ကို 2: နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း Update ကို iTunes က
iTunes နဲ့အိုင်ဖုန်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သင်၏ကွန်ပျူတာ mediakombayn ၏အဟောင်း version ကိုအပြေးနေသည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သာ updates တွေကို iTunes ကိုစစ်ဆေးသည်နှင့်, လိုအပ်ပါကသူတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ iTunes ကို update ကိုပြီးစီးပြီးနောက်ကွန်ပျူတာ reboot လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် iTunes ကို Update လုပ်နည်း
Method ကို 3: ကွဲပြားခြားနားသောက USB-port ကိုသုံးပါ
ထိုသို့သောအကွံဉာဏျသင်၏ USB-port ကိုအမိန့်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့်နေဆဲအခြား USB မှတ်-port ကို cable ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား, ထိုသို့ဥပမာ, Built-in ကီးဘုတ်အဆိုပါဆိပ်ကမ်းများရှောင်ရှားရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သငျ့သညျ။
Method ကို 4: အစားထိုး cable ကိုလုပ်ဆောင်
ဤသည် Non-မူရင်းကြိုးတွေ၏အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား cable ကိုသုံးပြီးကြိုးစားပါ, မူရင်းနှင့်မြင်နိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲသေချာပါစေ။
Method ကို 5: DFU mode ကိုတဆင့် device ကို restore
ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ငါတို့သည်သင်တို့ DFU mode ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ device ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်သို့မဟုတ် restore လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။
DFU - ထို gadget က restore သို့မဟုတ် upgrade လုပ်ဖို့အင်အားခွင့်ပြုအထူးနှိုးဆော်သံ mode ကို iPhone နှင့်အခြား Apple က-devices များ။
, ဒီလမ်းအတွက် device ကို restore ကို USB-cable ကို အသုံးပြု. သင်၏ PC ဖို့ gadget က connect, iTunes ကိုဖွင့်လိုက်ပါ, ပြီးတော့လုံးဝအိုင်ဖုန်းကို turn off ။ ရန်
အခုတော့ device ကိုအောက်ပါပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း DFU-mode ကိုဝင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်: Home ခလုတ် (ဗဟို "မူလစာမျက်နှာ" ခလုတ်ကို) စာနယ်ဇင်းပြုလုပ်ဖြန့်ချိခြင်းမရှိဘဲ, ထို့နောက်3စက္ကန့်ကို Power button ကို (switch ကို) ကိုင်ထားပါ။ 10 စက္ကန့်အတွင်းရောက်သည်နှစ်ခုသော့ကိုင်ထား, ပြီးတော့ပါဝါလွှတ်ပေးရန်, ဆဲမူလစာမျက်နှာခလုတ်ကိုကိုင်ထား။
မျက်နှာပြင်ကိုအောက်ပါဆင်တူတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသသည်အထိသင်က iTunes ကိုသည်အထိမူလစာမျက်နှာခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားရန်လိုအပ်မည်:
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုင်ဖုန်း Restore".
Method ကို 6: ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ Upgrade
သငျသညျအလွန်ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ Windows ကို update လုပ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်သင်အခုဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်သောလိမ့်မည်ပေမည်။ Windows7ကိုမှာ menu ကဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက" - "Windows Update ကို"လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဗားရှင်းအဟောင်း, ပွင့်လင်းအတွက် "န့်သတ်ချက်များ" ကီးဘုတ် shortcut ကို ဦးဝင်း + I ကိုထို့နောက်အပိုင်းကိုသွား "အပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်နှင့်လုံခြုံရေး".
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအဘို့အပေါငျးတို့သ updates များကို Install လုပ်ပါ။
Method ကို 7: အခြားကွန်ပျူတာဖို့ Apple ကကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ပါ
ဒါဟာကောင်းစွာသင့်ကွန်ပျူတာကို iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါတစ်ဦးအမှား9များ၏ဖြစ်ပျက်မှုအဘို့အအပြစ်တင်ဖို့ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထွက်ရှာရန်, အခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကိုမှသင့်ရဲ့ iPhone နဲ့ချိတ်ဆက်, ပြီးတော့ restore သို့မဟုတ် update ကိုကြိုးစားပါ။
ဤရွေ့ကား iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်များအတွက်ကုဒ်9နှင့်အတူအမှားဖြေရှင်းရန်အဓိကနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်သကဲ့သို့, ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်အကြံပြု ပြဿနာကပန်းသီး device အတွက်အိပ်ရလိမ့်မည်။